Iinkqubo zebiogas ezisekwe kwilindle lehagu eArgentina | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Iinkqubo zebiogas esekwe kwilindle lehagu eArgentina
Kwidolophu yaseHernando kwiphondo lase ECórdoba waqala ukusebenza kuqala Inkqubo ye-biogas hayi kuphela eArgentina kodwa nakwamanye uMzantsi Melika esekwe ilindle lehagu.
Olu hlobo lwenkqubo sele lusetyenziswa eYurophu naseMelika, kodwa kwamanye amazwe luselutsha kakhulu kwaye alwaziwa kangako.
Kwifama yeehagu, ii-biogas ziveliswa ngenkqubo eyenziwe zii-microturbines ezifakwe ngokwahlukeneyo njengoko zivelisa amandla emva koko intsalela iye kuthungelwano loluntu, olukule dolophu lubambisanayo.
Ngale nkqubo, umbane, gesi kunye nezichumisi eziphilayo zonke zivela kwilindle lehagu.
Umsebenzi ulula, inkunkuma eveliswa ziihagu isiwa echibini apho ihlaziswa khona ziibhaktheriya, yiyo loo nto i-biogas iveliswa, emva koko ithunyelwa kwisityalo esincinci ukuze kamva sihanjiswe ngemibhobho okanye ukuvelisa umbane i-microturbine.
Obu buchwephesha bulula, bunokulawulwa kude kwi-intanethi okanye kwisathelayithi, ine-thermal ephezulu esebenzayo, ivumela ukuhlangana kunye nokuzala ukuba kwenziwe ngesixhobo esifanayo.
Ingasetyenziswa kuzo zonke iintlobo zezakhiwo kunye namancedo ezolimo okanye imfuyo, into eza kutshintsha yimvelaphi yezinto eziphilayo.
Ukusetyenziswa kwee-microturbines zegesi ezithunyelwa ngerhasi yenye indlela yokujongana nokunqongophala kunye nexabiso eliphezulu lombane elichaphazela umhlaba wonke.
Ndiyathemba ukuba amanye amaziko kunye neenkampani ziyithathela ingqalelo le nkqubo biogas kuba isebenza kakuhle kakhulu, inezoqoqosho ukuyifaka kwaye inika iziphumo zoqoqosho ezigqwesileyo.
Sebenzisa amandla acocekileyo lukhetho olufikelelekayo njengoko kukho iitekhnoloji ezahlukeneyo, izixhobo kunye neenkqubo zayo yonke imfuno kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Ukusetyenziswa kwe-biogas kufuneka kuqhubeke nokukhula kwihlabathi liphela kuba ingumthombo omkhulu amandla acocekileyo.
UMTHOMBO: Biodiesel.com. ar
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biogas » Iinkqubo zebiogas esekwe kwilindle lehagu eArgentina
Amandla ombane ubulela kwii-volcano
ISpain lelinye lawona mazwe axhomekeke kakhulu kwioyile